Shirkadda Golis oo ka qayb qaadatay xaflad ay ku qalin jabiyeen ardayda Jamacadda Bosaso. | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo ka qayb qaadatay xaflad ay ku qalin jabiyeen ardayda Jamacadda Bosaso.
Shirkadda isgaarsiinta gayigeena ee Golis Telecom Somalia ayaa kaalin mug leh ka qaadatay munaasabad ay ku qalin-jabinayeen 250 arday oo dhiganayay qaybaha kala duwan ee jaamacadda Boosaaso.
Munaasabaddan oo ay soo camireen marti sharaf kala duwan oo dhinacyo kala duwan ka socotay ayaa waxaa sidoo kale fadhiyay ardaydii qalin jabinaysay oo way wajiyadooda ka muuqatay farxad aad u heer saraysa.
Shirkadda Golis oo lagu yaqaanay inay mar walba garab istaagto bahda waxbarashada ayaa munaasabaddan kula wadaagtay ardayda qalinjabinaysay hadiyado qaali ah oo ay ugu dhiirigalinayso yoolka muhiimka ah ee ay xaqiijiyeen.
Jaamac Xassan Bare oo kamid ah xafiiska suuqgaynta iyo xiriirka dadwaynaha oo kalmad ka jeediyay madasha ayaa isagaoo ku hadlaya magaca shirkadda Golis ugu hambaleeyay ardayda xafladda loo qabtay isagoo sheegay inay kula wadaagayaan hadiyado ay kamid yihiin Laptop-yo ay ku abaal marinayaan ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadkoodi ugu dambeeyay.
Masuuliyiinta jaamacadda Boosaaso oo iyaguna ka hadlay munaasabadda ayaa uga mahadceliyay maamulka shirkadda Golis sida ay had iyo jeer ugu taagantahay bulshadeeda marka laga kaalayo ganacsiga iyagoo xusay inay muuqato kaalinta ay ka qaadato shirkaddu goobaha waxbarashada iyo munaasabadohooda.
Waxaa muhiim ah in la dhiirigaliyo ardayda Soomaaliyeed maadaama ay yihiin jiilka kaliya ee lagu tashanayo inay badalaan xaalada uu dalku ku jiro waxana iyadoo shirkaddu hadafkaas ka duulayso ay kala qayb qaadataa ardayda munaasabadohooda gaarka ah iyadoo ku bixisa dadaal iyo kharash intaba.